အလှူခံရလာတဲ့ မူးယစ်ဆေးတမျိုးကို အမှတ်မထင်စားမိခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်သမီးလေး၊ ဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့နိုင်လို့ အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်
အလှူခံရလာတဲ့ မူးယစ်ဆေးတမျိုးကို အမှတ်မထင်စားမိခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်သမီးလေး၊ ဆေးရုံကိုအချိန်မီပို့နိုင်လို့ အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အဖြစ် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ ဟောလိုဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုကို ပျော်ပျာ်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနေကြတာပါ။ သရဲပုံစံနဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေကို ပုံစံတူဝတ်ပြီး၊ ကလေးတွေဟာ ရွှေဖရုံသီးပုံစံပုံးလေးတွေနဲ့ အလှူ လိုက်ခံလေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်တွေကကလေးတွေအတွက် သကြားလုံးတွေ အဓိကပေးလေ့ရှိသလို လက်ဆောင်လေးတွေလည်း ထည့်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမှာနေတဲ့ (၃)နှစ်သမီးလေး အဘီကလည်း သူမရဲ့အမေ တာရာနဲ့အတူ ဟောလိုဝင်းပွဲကို လိုက်ဆင်နွဲခဲ့ပါတယ်။ အဘီက ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်းက သကြားလုံးတွေ၊ မုန့်တွေ ပိုပေးခဲ့ကြပြီး၊ အဘီလေးကလည်း တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး နှိုက်စားနေခဲ့ပါတယ်။ ညပိုင်းအရောက်မှာတော့ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အဘီလေး ချောင်းတွေ တအားဆိုးလာပါတယ်။ အမေဖြစ်သူကို နေလို့မကောင်ဘူးလို့ …
ငရုတ်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ချဉ် ၊ ငရုတ် ကြက်သွန်ချဉ် လုပ်နည်းစုံ
ငရုတ်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ချဉ် ၊ ငရုတ် ကြက်သွန်ချဉ် လုပ်နည်းစုံ ငရုတ်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ချဉ် ၊ ငရုတ် ကြက်သွန်ချဉ် ကျမအိမ်မှာ အဆင်သင့် အမြဲလုပ်ထားတတ်တဲ့ အိမ်လုပ်ချဉ် လေးတွေကို စားချင်တဲ့ သူများအတွက် တင်ပေးလိုက် တယ်နော် ။ ……… ပါဝင် ပစ္စည်းများ ……. ၁ ။ ကြက်သွန်ဖြူ ဥတစ်လုံး ( အခွံနွှာထားပါ ) ……. ၂ ။ ငရုတ်တောင့် ရှည် ( ခပ်ထူထူ လှီးထားပါ )…….. ၃ ။ ရှာလကာရည်……၄ ။ ငံပြာရည်………. ၅ ။ …
အ စာ အိမ် ရော ဂါ ဖြစ် တာ ( ၆ ) နှစ် ကျော် ကို ပျောက် သွား တဲ့ ကိုယ် တွေ့ ဆေး နည်း
အ စာ အိမ် ရော ဂါ ဖြစ် တာ ( ၆ ) နှစ် ကျော် ကို ပျောက် သွား တဲ့ ကိုယ် တွေ့ ဆေး နည်း ကျွန် တော် အ စာ အိမ် ရော ဂါ ဖြစ် တာ ၆ နှစ် ကျော် ပြီ ဗျ ။ အ စာ အိမ် ဖောက် လို့ ဆေး ရုံ တစ် လ နီး ပါး တက် ခဲ့ ဖူး တယ် …
ဘယ်တော့မှ မကောက်ကျစ်တက်တဲ့ Aသွေးအကြောင်းလေးများ
ဘယ်တော့မှ မကောက်ကျစ်တက်တဲ့ Aသွေး အကြောင်းလေးများ ”ကျွန်တော်သိသော’”” (A) ’””သွေး အကြောင်းလေးများ”” အသဲတွေဘယ်လောက်ကွဲကွဲ အမှတ်မရှိ ပြန်မျှော်လင့် နေတတ်တာ”A သွေး” စိတ်ညစ်နေရင် ဘယ်သူကိုမှ ရင်မဖွင့်တတ်ဘူး တစ်ယောက်ထဲ ကျိတ် ခံစားနေတတ်တာ “Aသွေး” မနက်အစော ကြီးထရမှာကို အမုန်းဆုံး… လာနိုးတဲ့ သူက ရန်သူ… ”Aသွေး” အသဲကွဲတယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူမှမယုံ… ရုပ်က စပ်ဖြီးဖြီး ဖြစ်နေလို့ပဲ ”Aသွေး” ထမင်းစားတာထက် မုန့်စားတာ ပိုနှစ်သက်တယ်.. တစ်ခုခု စားနေကမှ အဆင်ပြေတာ…”Aသွေး” တစ်ကယ်လက်တွေ့မှာ အဖော်မဲ့နေတာ များတယ်… အများအမြင်က ရှက်တဲ့သူ “Aသွေး” ခရီးသွားနေရရင် ပီးကော., ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ပျော်နေတတ်သူပါ.. …
အပျိုဖြစ်သွားပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလိုက်တဲ့ သုသု
သုသုကတော့ “ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို တခဲနက်ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သုသုဟာ မိတ်ကပ်လောကမှာ ထူးချွန်ထက်မြတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပထဦးဆုံးအနေနဲ့ “ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေအတွက် ဘ၀အမောတွေကို ပြေပျောက်စေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် ရုံပြည့်ရုံလျှံဖြစ်တဲ့ အထိ ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးပျော်အောင် ဟာသဗွီဒီယိုအတိုလေးတွေတင်ပြီး ဘဝအမောတွေပြေစေသူတစ်ယောက်ပါ။ သုသုဟာ အရင်တုန်းကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး social media မှာ ချပြလေ့ရှိပေမယ့်အခုနောက်ပိ်ုင်းနှစ်တွေမှာ ချစ်သူကို မရရအောင်ဥထားပြီး ပရိသတ်တွေကိုချမပြတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သုသုရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကတော့သုသုရဲ့ ချစ်သူကိုသိကြပုံရပါတယ်။မကြာသေးမီက သုသုက ချစ်သူနဲ့ iPhone ဆင်တူကိုင်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာကြွားလာခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကို အမျိုးမျိုးစနောက်တတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတတ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သုသုက အခုတစ်ခါမှာလည်း ပရိသတ်တွေကိုစနောက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ သုသုက …
ငွေဝင်ရွှေဝင်ရက်နှင့် မတင်ဘူးဖြစ်နေလျှင် ယတြာ
ငွေဝင်ရွှေဝင်ရက်နှင့် မတင်ဘူးဖြစ်နေလျှင် ယတြာ အဖိုးတန်ရတနာများ မြဲမြံ တိုးပွားစေဖို့ ငွေ ဝင်တော့ဝင်တယ် မမြဲဘူး ဝင်တာများလည်း ထွက်တာများတယ် ဆိုသူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်စရာနည်းတစ်ခုပါ ။ မိမိမြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို ၇ နဲ့စားပါ အကြွင်းအလိုက် ဖော်ပြပါနည်းကို ပြုလုပ်ပါ ။ ၁. ကြွင်းး ငွေကို နီညိုရောင်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ထည့်ပါ (သို့) ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို (ဇီးသား) လက်တစ်ဆစ်လောက် အပြားလေး ထည့်ထားပါ။ ၂. ကြွင်း ငွေကိုအစိမ်းရောင် ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ထည့်ပါ (သို့) ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို (အုန်းသား) လက် တစ်ဆစ်လောက် အပြားလေး ထည့်ထားပါ။ ၃. ကြွင်း ငွေကို အဝါရောင်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ထည့်ပါ (သို့) ပျဉ်းမသား လက်တစ်ဆစ်လောက် အပြားလေး …
နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မိုးလေ၀သ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်
နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ မိုးလေ၀သ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်နိုင်သည် ….။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအချို့ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် …။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအချို့မှာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်မယ်လို့ မိုးဇလက ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ် …။ ဒီနေ့မနက် ၆ နာရီခွဲ တိုင်းထွာချက်အရ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် အားလျော့သွားခဲ့ပြီး အနောက်မြောက်ဘက်ကို ဆက်လက် ရွေ့လျားနေပါတယ် …။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအရှိန်ကြောင့် ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း၊ …
Result Show မတိုင်မီ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့် ဟက်ခံလိုက်ရတဲ့ အက်စတာ
Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး အဆိုပြိုင်ပွဲပါ။ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ ပရိ သတ်တွေ ကို ပြိုင်ပွဲရဲ့ အစအလယ်အဆုံး နောက်ဆုံး အချိန်ထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ အဆိုပြိုင်ပွဲပါ။အခုလက်ရှိမှာတော့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အသီးသီးမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို လိုက်လံ ရွေးချယ်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ထုတ်လွှင့်ပြသနေ တာပါ။ သူ့ထက် ငါ ပိုကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် ထွက်ပေါ် လျက်ရှိပါတယ်။ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကိုတော့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ “ဆုန်ဆုန်” လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ” We Love Esther Dawt Chin Sung (ဆုန်ဆုန်) ” ဆိုတဲ့ We Love Group …
သူမရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
၀၀တုတ်တုတ်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မောင်ချိုကတော့ ဝိတ်ချတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မောင်ချိုဟာ ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အတော်လေးရရှိတဲ့မိန်းကလေးလို့ဆိုရမှာပါ။မောင်ချိုဟာ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season-3 ရဲ့ First Runner Up ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်တစ်လျှောက်မှာလည်း ပရိသတ်ဝန်းရံမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တရများစွာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သူရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့(11)ကိုအမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ “Eleven” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သီချင်းခွေတစ်ခွေထွက်ရှိဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသီချင်းခွေမှာဆိုရင် သီချင်းစုစုပေါင်း(၁၁)ပုဒ်ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး အမှတ်တရဖြစ်အောင် နိုဝင်ဘာလ(၁၁)မှာထွက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ချိုဟာ ယောက်ျားလေးပုံစံအတိုင်းဝတ်စားလေ့ရှိတာကြောင့် တချို့သောပရိသတ်တွေကတော့ သူမကို Tom boyလေးလားလို့ သိချင်နေကြပါတယ်။ မောင်ချိုဟာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း တခါမှမပြောခဲ့ဖူးတာမို့ ပရိသတ်ကြီးကတော့ သူမရဲ့အချစ်ရေးကိုလည်း စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ သူမရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း “မောင်ချိုက ယောက်ျားလေးပုံစံ အမြဲနေတော့ Propose လုပ်တဲ့သူ အခုထိ မရှိသေးပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး မောင်ချို မှာ …
This Month : 33709
This Year : 204935
Total Users : 500068
Total views : 2069372